WORRAAQSI ITTI FUFA! -
Woyyaanee Must Go!
Woyyaaneen Kufteerti!; kanaafis maallaqa heddu miliksaa jirti; meeshaa baay’ee gara dhabsiisaa jirti!
Uummanni keenna waa Sadi cabseera:
Sodaa – Sodaa Hidhaa fi ajjeechaa ofirraa mulqee gateera.
Eeggattummaa: Bilisummaa qaama biraarraa eeggachuu dhiiseera. Abalutti dhufee na bilisoomsa waan jedhu bira darbeera. Ofiin falmatee mormee gonfachuuf murteeffateera.
Barbaachisummaa Tumsa Uumachuu fi Qaama tokkorratti xiyyeeffachuu:
Sochii Yeroo garaa garaa godhamu keessatti kallattiidhaan mootummaa irratti hin xiyyeeffatu. Woyyaaneen salphumatti gara biraa takkaahuu gara “nafxanyaa” Yokaan ammoo gara OPDO ykn Saba biraatiin wolitti dirtee kallattii jirjiirsisaa turte. Barana kana gochuu hin dandeenne; sabni itti dammaqeera. Isumaayyuu saboonni biraatuu gaaffii mataafii qabatanii akka fincila tti makaman affeeraa jira.
Leellistoota Tokkummaa Itoophiyaa FI Oromoon wolfaana martuu alaabaa ofii qabatee wolfaana bahuun TUMSA Injifannoo deplomacy nuu fida. Kana sabni keenna hubateera.
Odeeffannoo keessa jaraatii baate:
♣Meeshaa Woraanaa gurguddaa gara Tograayiitti fe’aniiru. Jet lolaa fi kkf mara
♣Hojjattoota tikaa fi loltoota tarkaaffii Saba Oromo irratti gaggeeffamaa jiru morman hedduu bakka buutee isaanii dhabamsiisaniiru jedhamaa jira.
♣Wolumaa galatti ADWUI keessa sabni biraa marti hanga fedhe akka Sareetti isaan jala eegee wirsulle “Shakkamaa” dha jedhu keessa beektonni.
Gaaffii Miseensotaa fi hoggatoota DH.D.U.O tiif:
Hanga yoomiitti isin gadgaloo taatanii, uummata keenna gad-galoo taasiftu?
Hanga yoomiitti Abbaay Tsahaayyee fi Geetaachoo Raddaa (TPLF) nu arrabsisiistu?
Hanga yoomiitti tuffatamtanii nu tuffachiiftu?
Umrii meeqa jiraattu? Buddeena meeqa nyaatu?
Yoki dhaaba taatanii akka dhaabaatti angoo isiniin malte hin qabatanu! Yoki saba keessan woliin mirga keessaniif hin dhaabbattanu. Dhakaa qofatti hin jirjiiramne. Ilmi namaa Ni jirjiirama.
“Guddaan keessan hin dubbatu;
Diqqaan keessan hin guddatu;
Isin baruu Qacoo udaan kiyyaa ti” ka simbirreen jetteen kaan.
Dubbiin Masterplan qofaa moti. Dubbiin Dubbii jirjiirama Woliigalaa fiduu ti.
Uummanni keenna ba’aa guddaa kana ofirraa buusuun dirqama isaa ti.
??Saamicha Lafaa fi albuudaa
?Beela fi Hiyyummaa
?Hanqinna Tajaajila Fayyaa fi Barnootaa
?Dhaba Bilisummaa fi Dimookraasii
?Seera Liizii -Wolumaa galatti mirga qabeenna horachuu (Right to property) uummataa mulqeera
?Hojii -dhabummaa (unemployment)
?Olaantummaa Saba tokkoo
?Gibira Humnaa Olii -Qabeennaa Oli
?Hidha Abbaay maqaa jedhuun dirqisiisuun mallaqa irraa saamuu
?Hidhaa fi Ajjeechaa Barattoota
Kana Mara baadhatee ta’uu hin danda’u. Nu gaheera- Enough is Enough yennaan jedhu amma.
Hidhaa fi ajjeechaan Qabsoo biyya kamiiyyuu dhaabdee hin beektu. Qabsoo Africa kibbaa hin dhaabne. Hiriira Soweto daa’immaan 176 ajjeefame. Lakkofsi barattoota ajjeefamanii 700 worri jedhulle Ni jira. Hiriira sanirratti Barattoota 20,000 olitti hirmaate.
The Soweto Uprising, also known as 16 June, were a series of protests led by high school students in South Africa that began on the morning of 16 June 1976. Students from numerous Sowetan schools began to protest in the streets of Soweto in response to the introduction of Afrikaans as the medium of instruction in local schools. An estimated 20,000 students took part in the protests. They were met with fierce police brutality. The number of protesters who police killed is usually given as 176, with estimates of up to 700. 16 June is now a public holiday, Youth Day, in South Africa, in remembrance of the events of 1976. Booda moohatanii bilisoomaniiru.
Hidha fi ajjeechaan qabsoo Hindii hin laamshessine. Gaandiin uummata Hindii hogganee tooftaa qabsoo nagaa gara garaa kan akka mana ooluu (strike) , meeshaa (oomisha) koloneeffattootaa bituu dhiisuu; konkolaataa isaanii koruu dhiisuu fi kkf fayyadamee bilisoomse!
Qabsoon Lola malee (Non-violent Revolution ) biyyoota garaa garaatti hojjatteerti.
Mootummaa kan utubeeru Ka jala dhaabatee ba’ateeru UTUBAAN uummata.
Uummanni hidhaa fi ajjeechaa sodaa dhiisee jalaa gorraan mootummaan lafa tee’a!
?Revolution, in the Philippines from which the term ‘people power’ came to be widely used.
?Three years later, the Revolutions of 1989 that ousted communist regimes in the Eastern Blocreinforced the concept (with the notable exception of the notoriously bloody Romanian Revolution), beginning with the victory of Solidarity in that year’s Polish legislative elections.
?The Revolutions of 1989 provided the template for the so-called color revolutions in mainly post-communist states, which tended to use a color or flower as a symbol, somewhat in the manner of the Velvet Revolution in Czechoslovakia.
?In December 1989, inspired by the anti-communist revolutions in Eastern Europe, the Mongolian Democratic Union (MDU) organized popular street protests and hunger strikes against the communist regime.
?Recent nonviolent revolutions include the Orange Revolution in Ukraine, which was highlighted by a series of acts of civil disobedience, sit-ins, and general strikes organized by the opposition movement.
Hidhaa fi ajjeechaan Hatattamaan haa dhaabbatu. Mirgi Hiriira bahuu haa kabajamuu.
Hidhamaan Siyaasaa marti haa hiikamu.
Masterplan fi labsiin magaalotaa Hatattamaan haa haqaman (Labsii biraatiin) Lafti ummataaf haa deebitu.
Yakkamtoonni uummata Nagaa ajjeessanii fi madeessan seeratti haa dhiyaatan. Badii raawwatameef mootummaan gad-bayee dhiifama uummata haa gaafatu. (Keessattuu worri uummataan Sheexana (Gaanen) jedhee fi worri “Likki inasgebballen” jedhee dhaadate faan.
Badiin raawwatame qaama bilisaan haa qoratamu.
Mootummaan duruu sagalee uummataa same waan ta’eef Manneen maree diigamanii filannoon haa gaggeeffamu.
Isaan Kun haal-duree tokko malee yo hin guutamne mormiin hin dhaabbatu.
DHAABBIIN MORMII KEENYAA BILISUMMAA KEENYA BOODADHA!!
3 thoughts on “WORRAAQSI ITTI FUFA!”
Ittii dabaludhaf Motuumaan tayitaa ha gadhisu, “Transion gov”. Hadhabatu.
Let us use our undeniable economic and social power. Oromoos should stop socializing with Wayyaanee related people. Let us refuse their invitations, celebrations and community co-operations. Oromoos should stop to buy any thing from non Oromoo supporters. This will deny the enemy the means to buy bullets which kill Oromoos. We must refuse to pay tax to terrorist wayyaanee. TPLF CANNOT force us to pay what we do not have. They have taken it all. It will deny the enemy the reason to live and prosper among Oromoos.
haata’u garuu murteessaan xumura isaa ti. Utuu xumura isaa hin’argiin baay’ee “celebrate” hingoonu. Waa’ee hedduutu nu hafa. Cimina fi dogoggoro darbe irraa muuxannoo argachaa daraanuu jabeessinee utuu addaan hinkutiin addunya mara irratti qabsoo ittifufuu qabna. Tooftaa fi tarsiimoo haaraa fayyadamaa ittifufu. Karuma baratame qofa miti.